Amazon sonyekwara na FLoC mgbochi | Site na Linux
Amazon sonyekwara na mgbochi FLoC
Ugbua n'oge dị iche iche anyị ekwuola gbasara FloC (sistemụ nke na-anọchi kuki mgbasa ozi na Chrome) ebe a na blog na o nyere ọtụtụ ihe na-ekwu banyere Dika ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị iche iche yana ndị mmepe ama ama ama ama na mba nke teknụzụ gosipụtara ekwenyeghị na iwebata usoro ihe a na Chrome.
Na nke ahụ nzuzo na-akwado, mana o sina dị, ha na-ada ụda banyere ihe ha hụrụ dị ka teknụzụ ka njọ, na ndị na-ere ihe nchọgharị dabeere na Chromium dị ka Brave na Vivaldi na-etinye aka n'ịlụ ọgụ FLoC n'ụdị ya niile.
Otú ahụ ka ọ dị na GitHub nke n’izuụka gara aga mere ka amara ọnọdụ ya na FloC na ndị nwere nkwarụ Floc mgbe ị na-emejuputa isi isiokwu HTTP na saịtị GitHub niile.
Ebe ọ bụ na GitHub gwara ndị ọrụ banyere ịgbakwunye nkụnye eji isi mee HTTP nke ga-egbochi FLoC na nchịkọta Bochum koodu. Ma isi HTTP maka github.com na ngalaba ọzọ github.io weghachite nkụnye eji isi mee "Ikike-Iwu: mmasị-cohort = ()". N'ihe gbasara onye ọrụ ọ bụla, a ga-egbochi nsuso FLoC nke Google na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ ibe weebụ akwadoro na ngalaba abụọ a.
Ma ugbu a, Amazon emeela mkpebi iji gbochie FloCdị ka ọtụtụ ngwongwo Amazon, gụnyere Amazon, WholeFoods, na Zappos, na-egbochi usoro nsuso FLoC nke Google iji nakọta data bara uru nke gosipụtara ngwaahịa achọtara na saịtị e-commerce nke Amazon, dabere na koodu weebụsaịtị nke ndị ọkachamara na teknụzụ nyochachara.
Amanda Martin kwuru, osote onye isi ụlọ ọrụ mmekọrịta na ụlọ ọrụ dijitalụ nke Goodway Group kwuru, "Mkpebi a metụtara kpọmkwem mbọ Google nyere ịnye ihe ọzọ na kuki ndị ọzọ."
Dabere na ndị ọkachamara gụrụ koodu iyi nke saịtị Amazon, nnukwu ndị na-ere ahịa tinye koodu na njirimara dijitalụ ya iji gbochie FLoC site na nsuso ndị ọbịa na-eji ihe nchọgharị Chrome.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe mmalite nke izu WholeFoods.com na Woot.com etinyeghị koodu iji gbochie FLoC, na Tọzdee ha chọpụtara na saịtị ndị a nwere koodu nke gwara usoro Google ka ọ ghara ịgụnye ọrụ nke ndị ọbịa ha. iji kọọ ma ọ bụ nye ndị nchọpụta.
Otú ọ dị, enwere ịdọ aka na ntị banyere igbochi FLoC na ibe site na nri niile. Ọ bụ ezie na ngalaba ndị ọzọ nwere Amazon na-ekwu ebe a na-egbochi FLoC na-eme nke a site na iji usoro Google kwadoro iji zipu isi nzaghachi site na peeji HTML, Mgbakwunye nri niile na-eji ụzọ aghụghọ nke na-eziga onye na-edebanye aha na isi na arịrịọ maka nyocha Amazon.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche nke ahụ Amazon na-emepe emepe ọ bụghị naanị azụmahịa ịzụ ahịa n'ịntanetị, kamakwa azụmahịa mgbasa ozi, nke Google na Facebook nwere oke oke nke ahịa mgbasa ozi dijitalụ ugbu a, mana a na-akọkwa azụmaahịa mgbasa ozi Amazon na-eto n'ike n'ike.
A na-atụ anya ka Amazon mepụta ihe ngosi mgbasa ozi nke ya n’ọdịniihu. ma na-anwa imeziwanye ngwaọrụ nke usoro achọrọ (DSP) na-enweghị ntinye aka nke Google. Mkpebi igbochi FLoC abụghị naanị uru ọ bara, kamakwa mkpebi asọmpi.
Mgbe O nwere ike iyi ihe doro anya na Amazon chọrọ ịkwụsị atụmatụ Google ọ bụla, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ihe iji gbochie ihe ịga nke ọma nke FLoC. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụghị maka ọdịmma kasịnụ nke Amazon ịhapụ ndị dị ka Google ma ọ bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ iji rite uru na data ahịa gị bara uru.
Na-enweghị ndị ọbịa Amazon na data anakọtara, Google FLoC nwere ike ịbụ ọghọmonye ọrụ ụlọ ọrụ kwuru na amaghị aha.
Ọ bụrụ na Amazon họọrọ ịghara igbochi FLoC, ụlọ ọrụ ahụ gaara enyere Google aka site na ịhapụ:
Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru, sị, "Nsonaazụ dị mma nke ụfọdụ ịzụrụ FLoC n'ahịa." Ihe ndị Google kwuru banyere arụmọrụ nke usoro ahụ abụrụla nyocha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Amazon sonyekwara na mgbochi FLoC
YOS-P1: Explochọgharị nnukwu Yahoo Open Source - Nkebi 1